NextMapping | यहाँ के २०२१ मा अगाडि हेर्ने हो
२०२१ मा अगाडि हेर्ने कुरा यही हो। २०२० मा संसार ठूलो परिवर्तन भयो - हाम्रो काम गर्ने तरिका - हाम्रो जीवनशैली र हामी भविष्यमा हेर्ने तरिका।
२०२० मा हामी सबै सहमत हुन सक्छौं कि हामी सबैले कुनै न कुनै तनावको अनुभव गरिरहेका छौं।
मानव हुन तनाव अनुभव छ। जुन डिग्री हामीले तनावमा प्रतिक्रिया दिन्छौं त्यो डिग्री त्यो हो जुन हामीले दु: ख भोग्छौं।
महामारीको सुरुदेखि हामीले केही हजार व्यक्तिहरू सर्वेक्षण गरिसकेका छौं र २०२० को तनावमा तीन फरक प्रकारका प्रतिक्रियाहरू भेट्यौं।
सर्वेक्षण गरिएको %०% व्यक्तिले भने कि तिनीहरू टाढाबाट काम गर्न मन पराउँछन् र उनीहरू एक्लै काम गर्न मन पराउँछन्। हामीले विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व प्रकारहरू बीच एक सम्बन्ध पाएका छौं जसले एक्लो काम गर्नका साथै फ्याँकिदा पनि राम्रो गरी काम गर्छ। उनीहरूले यसलाई अवरोधका अवरोधहरू बिना उनीहरूलाई अधिक उत्पादक हुन सहयोगको रूपमा देख्छन्।
सर्वेक्षण गरिएको of 43% व्यक्तिले भने कि तिनीहरू टाढा टाढाको रूपमा काम गर्न रुचाउँदछन् तर उनीहरू वास्तवमा कफीमा जान वा सामाजिक सहकर्मीहरूसँग अफिस च्याट गर्न सक्षम हुने सामाजिक पक्षलाई वेवास्ता गर्छन्। हामीले सामाजिक व्यक्तित्व प्रकारहरू बीच एक सम्बन्ध पाएका छौं जसले मानव अन्तर्क्रियामा मानवमा फल फल्छ र अन्य व्यक्तिको वरिपरिबाट उर्जा प्राप्त गर्दछ।
सर्वेक्षण गरिएको २ of% व्यक्ति अनुत्पादक र चिन्तित भएको कारण टाढाबाट काम गर्दै संघर्ष गर्दैछन्। हामीले चालक व्यक्तित्वका प्रकारहरू बीचको सम्बन्ध पाउँदछौं जसले आफूलाई उनीहरूको वातावरण र उनीहरूको वास्तविकताको केही 'नियन्त्रण' महसुस गरे पछि उत्तम महसुस गर्दछन्।
माथिका तीन सर्वेक्षण प्रतिक्रियाहरू मध्ये तपाइँ आफैंलाई कहाँ राख्नुहुन्छ?
मेरो लागि म भन्न चाहन्छु कि म ती दुई समूहहरूको साथ पign्क्तिबद्ध गर्दछु जो अनुकूलन गरिरहेछन् र अझै 'लाइभ' समूहहरूको सामाजिक अन्तरक्रिया छुटाउँदछन्।
भर्खरै भर्चुअल मुख्य प्रस्तुतीकरणको बेला जुन मैले डेलिभर गर्दै थिएँ, मैले समूहलाई एक अनलाइन सर्वेक्षणमार्फत सोधें कि २०२० को अवरोधका सकारात्मक पक्षहरू के थिए - यहाँ प्रतिक्रियाहरूका अंशहरू छन्:
कम्पनीलाई भर्चुअल / रिमोट वर्किंग अपनाउन बाध्य पार्‍यो
कम कम्युटिंग जुन दिनमा बढी समयको लागि बराबर हुन्छ
परिवारको साथ बढी समय
परिवार संग अधिक गुणवत्ता समय
मानहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न खाली ठाउँ सिर्जना गरियो र के महत्त्वपूर्ण छ
समग्र भलाईमा ध्यान केन्द्रित गर्न बढी समय
वस्तुतः अन्तर्क्रिया गर्न लाभप्रविधि
कम्पनी भित्र समग्र टोलीहरु संग बढी जडित महसुस
टीम / मलाई अधिक अनुकूलनीय, फुर्तिलो र नवीन हुन को कारण हो
वास्तविकता यो हो कि यद्यपि २०२० गहिरा परिवर्तनको वर्षको रूपमा इतिहासमा तल झर्नेछ।
प्रि-कोविड हामीमध्ये धेरै रोबोटाइज भइरहेका थियौं हाम्रो टेक्नोलोजीमा टेदर गरिएको थियो र हामी सबै एक सय माइल एक घण्टामा जाँदै थियौं। एक पटक कोविड भयो यो यदि सामूहिक 'ब्रेक' थिचिएको थियो र हामी सबैले लामो श्वास लिनुपर्‍यो र २०२१ मा हामी जाँदै गरेको ठाउँमा पुन: सेट गर्न रोकिनु पर्‍यो।
त्यसैले अब हामी भविष्यमा हेर्छौं र २०२१ मा अगाडि हेर्ने कुरा यही हो।
हामीसँग एउटा राम्रो खबर छ कि त्यहाँ खोपहरू छन् अब कोरोनाभाइरसलाई रोक्नको लागि 95%% प्रभावकारी साबित भइरहेका छन्। यदि महामारी दश वर्ष पहिले भएको थियो भने हामीसँग यत्तिको छिटो समाधान हुने थिएन।
पिटर Diamandis "प्रशस्त" को प्रसिद्ध लेखक र सिंगुलरिटी युनिभर्सिटीका सह संस्थापक भन्छन कि आजको प्रविधि आविष्कारको साथ खोपको गति अभूतपूर्व छ।
हो, हामी दोस्रो छालको बीचमा छौं र बाँकी २०२० सम्म हामीले यात्रा गर्नुपर्दछ, भ्याक्सिनको समाचारको राम्रो भविष्यको आशा छ।
दीर्घकालीन तनावको यस समयमा हामी आशावादी परिवर्तनको लागि प्रतिक्षा गरिरहनुपर्दछ।
२०२१ मा अगाडि हेर्ने अन्य चीजहरू भलाइमा बढी केन्द्रित छन्। रोजगारदाताहरूले चिन्न र आफ्ना कामदारहरूको लागि तनाव वास्तविकतासँग समानुभूति प्रदान गर्दैछन्। २०२१ मा हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी सबै कसरी राम्रा मानिसहरु हुने र अरुलाई पहिले भन्दा भन्दा अझ बढी कसरी सहायता गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछौं।
टाढाको काम यहाँ छ २०२१ मा र यस भन्दा पर रहनको लागि। हामी मा NextMapping २०२० सम्ममा force०% कार्यबल टाढैबाट काम गर्नेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो - हामीले महामारीको भविष्यवाणी गरेका थिएनौं! जे भए पनि के भएको छ कि कम्पनीहरूले पत्ता लगाए कि तिनीहरू टाढाको पिभोट गर्न सकिन्छ र तिनीहरूले यसलाई कार्य गर्न सक्दछन्।
कामदारहरू जो कार्यालयमा गरेको भन्दा औसत एक घण्टाको लागि टाढाको काम गर्दछन्। सर्वेक्षण गरिएको धेरै कामदारहरूले भने कि तिनीहरू टाढाबाट काम गरेकोमा दोषी महसुस गर्छन् र त्यसैले उनीहरू पहिलेभन्दा धेरै लामो र कडा मेहनत गर्छन्। थप रूपमा कामदारहरू उनीहरूको रोजगारदातालाई व्यावहारिक रहन चाहन्छन् ताकि तिनीहरू दृश्य र सान्दर्भिक रहनको लागि काम गरिरहेका छन्।
रोजगारदाताहरूले देख्दछन् टाढाको कार्यलाई एक सकारात्मक चीजको रूपमा त्यसमा मिथ्या भन्ने कि दृष्टि बाहिर कामदारहरूको मतलब काम नभएको भनाइ छ।
द्वारा एक सर्वेक्षण ग्लोबल वर्कप्लेस एनालिटिक्स भेट्टाए कि %०% कामदारहरूले विश्वास गर्छन् कि उनीहरू घरबाट बढी उत्पादनशील छन्। अगाडि बढ्ने forward forward% कामदारहरू महामारीको पछि हप्तामा कम्तिमा एक दिन घरबाट काम गर्न चाहन्छन्।
२०२१ मा हामी एक हेर्नेछौं संकर कार्यस्थल जहाँ प्रत्येक कार्यस्थलमा टाढाको कार्य नीति हुन्छ जहाँ कामदारहरूले छनौट गर्न सक्दछन घरमै कति पटक अफिसमा काम गर्ने भनेर।
सर्वेक्षण गरिएको १०% कामदारहरूले भने कि तिनीहरू आफ्नो कार्यालयमा पूर्ण समय फर्कन उत्सुक छन्।
2021 मा हामी निजी कार्यालय मा रिक्त स्थान रूपान्तरण घरमा वृद्धि हेर्न जाँदैछन्। महामारीको बेलामा पहिले नै सम्पत्ति गतिविधि रेकर्ड उच्च रहेको छ। हामी मान्छे ग्रामीण र उपनगरीय स्थानहरू गर्न सार्दै हुनुहुन्छ जहाँ उल्टो माइग्रेसन हेर्दै हुनुहुन्छ। किन? यदि हामी हालतमा हामी बाँच्न सक्छ र कार्य कहीं कि टाढैबाट काम गर्न सक्छन् किनभने।
२०२१ ले देखा पर्नेछ कि जो विजेताहरूको रूपमा बाहिर अनिश्चितता र अस्थिरता नेभिगेट गर्न सक्षम छन्।
खोज शब्द 'आतंक हमला' सेप्टेम्बर २०१२ बाट सेप्टेम्बर २०२० मा 340०% मा वृद्धि भयो।
त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि २०२० एक आतंक आक्रमण प्रेरणा वर्ष हो।
म एक यथार्थवादी आशावादी हुँ र मलाई लाग्छ कि २०२१ मा चीजहरू अलिकति तल झर्नेछ। हामी कोविड र यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे बढी जान्न हामी अलि बढी स्थिर महसुस गर्नेछौं। २०२१ मा हामीसँग केही समय खोप दिइनेछ जसले यसको प्रभावमाथि नियन्त्रणको भावना प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि त्यहाँ एक प्रमुख शिक्षा छ जुन २०२० सम्म आयो भने हामीसँग धेरै चीजहरूमा शून्य नियन्त्रण छ। उही समयमा हामीलाई के गर्न सकिन्छ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी एक अवसर दिइएको छ जुन हाम्रो विचारहरु, प्रतिक्रियाहरु, र व्यवहार हो।
२०२१ मा हेर्नको लागि एउटा प्रमुख कुरा भनेको यो हो कि हामीले यसलाई २०२० मार्फत बनायौं र त्यसकारण यदि हामीले त्यसलाई यसलाई २०२२ बाट भन्न सक्यौं भने - यसलाई ल्याउनुहोस्!